PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-01-28 - SIMUNCU ISIMO NGOKUXOSHWA KUKA-DJ
SIMUNCU ISIMO NGOKUXOSHWA KUKA-DJ
Ilanga langeSonto - 2018-01-28 - Izindaba - THANDI ZONDI
IBHANTSHI kuthiwa ligcwale umoya kumsakazi wegagasi FM, UDJ Manny owethula uhlelo imanny Mayhem olungena emoyeni ngehora le-10 kusihlwa kuya kwelokuqala ezintatha.
Kuthiwa uxoshwe ngolwesine ngenxa yokwenza iphutha elithile emoyeni, nokho kakucaci ukuthi phutha lini lelo alenzile.
Umthombo WELANGA Langesonto ongashayi eceleni uthi isimo kasisihle ngaphakathi kulesi siteshi njengoba izisebenzi zisola abaphathi ngokukhetha iphela emasini.
Kuzokhumbuleka ukuthi ngozibandlela (December) bekumiswe emoyeni ufelix Hlophe ngenxa yezinsolo zokungaziphathi kahle emsakazweni, waze wabuyela emsebenzini kule nyanga.
Umthombo uthi izisebenzi ezithile zikholwa wukuthi bekungamele axoshwe UDJ Manny kodwa bekumele aphathwe njengofelix, aqale anikezwe incwadi yokumexwayisa.
Lo methuli ohambile ubengene ezicathulweni zikajoey Drumz naye okhonjwe indlela ngonyaka owedlule, okusolakala ukuthi waxoshwa ngoba ethole ithuba lokuba yinxusa lelebuli yezimpahla zokugqoka zakwaHead Honcho.
“Abantu bashayisana ngamakhanda, bayazibuza ukuthi kungani enganikwanga ithuba lo mfana ngoba uziphethe kahle.
“Zolo lokhu ubekade eyomela igagasi kwimtv Base futhi walimela ngendlela encomekayo. Uma kukhona odinga ukubanjelwa emoyeni ubegxuma kuqala, ubengumuntu onosizo,” kuchaza umthombo.
Umthombo uqhuba uthi kalikho iphutha elitheni elenziwe yilo msakazi. Amaphutha ajwayele ukuba makhulu kuyaye kube yilawo othola ukuthi mhlawumbe umsakazi uzongasidlali isikhangiso bese iklayenti lifake isimangalo.
“Isikhathi angena ngaso emoyeni sisuke singenazo izikhangiso. Kayikho into engamenza ukuba aze axoshwe emsakazweni,” kuqhuba umthombo.
Efonelwa UDJ Manny ucingo lwakhe belungena ebhokisini lemiyalezo ( voicemail). Ukhulekani Shandu ongumxhumanisi kwigagasi FM ephendula ngalawa mahlebezi uthe:
“Inkontileka kadj Manny bese iphelelwe yisikhathi, kayizange ivuselelwe. Okwamanje isikhala sakhe sizovalwa nguzisto kuze kube kutholakala umuntu ozongena ngokugcwele ezicathulweni zakhe nokuyinto ezokwenzeka emasontweni amabili,” kuphetha yena. tzondi@ilanganews.
KUGQASHUKE igoda phakathi kwegagasi FM nodj Manny msakazi.